Izicelo ze-CO2 Laser Machines Zomkhakha Ongena-Metal - I-Laser Yegolide
Izicelo ze-Las2 ze-CO2
Ekhuluma ngokuhlukaniswa okuqinile kwe-liquid, izindwangu zokuhlunga zibalulekile ekusebenzeni kokukhipha amanzi. Umshini wethu okhethekile wokusika i-laser ungadala ngempela ukulingana kwanoma yiluphi usayizi wamapuleti wokuhlunga.
Ukusika nokubhoboza ama-airbags, uhlelo lokusika i-laser lunezinzuzo ezisobala ngokuqhathaniswa nohlelo lokusika imishini olusebenzisa. Ukucutshungulwa kwe-Laser isebenzisa indlela yokupholisa amafutha. Akukho ukuthambeka kokuqukethwe.
Ngokungafani nezinto eziningi ezingezona zensimbi, izinto zokufakelwa zidinga ukusebenza kahle nokuqina. I-Laser iyithuluzi lokusika elinobungane kakhulu kwezemvelo yezinto zokufakelwa.
Izinzuzo eziningi zokusebenzisa indwangu yomoya duct zikhulisa isidingo sayo. Ukunemba nokusebenza kahle kokusikwa kwe-laser kungenza lula izinqubo zokusebenzisa izindwangu.
Amakhasimende aphishekela izingubo ezenziwe umuntu uqobo umkhuba wamanje. Usebenzisa umshini wokusika we-laser ukusika izindwangu zezindwangu usonga isikhathi sakho futhi uhlangabezana nezidingo zemikhiqizo eyenziwe ngezifiso.
I-GoldEN LASER's ilebula laser die cut isetshenziselwe ukuqeda i-label, ingubuchwepheshe be-laser yokusika ubuchwepheshe obuguqula ukugijima okufushane nomsebenzi ophakathi ngokuthembekile nangempumelelo, okwazi ukucubungula ukugeleza komsebenzi konke ngokwedijithali.
Izisombululo zesikhumba se-Gold Laser nezicathululo, ezihlome ngohlelo oluphezulu lokulawula ukunyakaza, ukuhlanganisa iphethini ngokwenziwe nge-digital, i-grading kanye ne-smart nesting neminye imisebenzi ngokubambisana nobuchwepheshe be-laser obungenakuqhathaniswa bokubuyisela ithuluzi elijwayelekile lokusika ...
Izisombululo zomkhakha we-Golden Laser zokugqoka zeGolide zenzelwe ikakhulukazi ukukhiqizwa kwe-batch encane, ukusikwa okukodwa kanye nokuvumelanisa, ukugoqwa kwendwangu yesampula, nezingubo zokugunda ezenziwe ngejubane eliphezulu ...